Interview | Filmy Bazar in Nepal
अहिले सम्म कुमारी नै छु : कोमल वली
फिल्मीबजार, १५ मंसिर २०७४,काठमाण्डौ । हाम्रो परिवार पुख्र्यौली थलो रोल्पाबाट दाङको टिकरी झरेको हो । वैशाख १ गते म त्यहीँ जन्मिएँ । टिकरी विकट गाउँ थियो, स्कुल जान नै दुई/तीन घन्टा हिँड्नुपर्थ्यो ।त्यसैले बुबाले हामीलाई स्कुल जान घोडा किनिदिनुभएको थियो । दाइ र म त्यही घोडा चढेर स्कुल जान्थ्यौँ । पछि टिकरीको सम्पत्ति पनि बेचेर हामी स्कुलनजिकै भएको दाङकै दोगरीमा ... Read More »
मलाई लभ गर्ने धेरै छन् : केकी अधिकारी
फिल्मीबजार, २७ कार्तिक २०७४,काठमाण्डौ । नाम जति युनिक या फरक खालको छ, त्यत्ति नै फरक शैलीको काम र सिनेमा वृत्तमा उपस्थिति जनाउन हरदम लालायित देखिन्छिन् उनी । उनी अर्थात् अभिनेत्री केकी अधिकारी ।केकीको परिवारले के सोचेर उनको नाम फरक खालको राखे, उनी स्वयम्लाई पनि थाहा छैन । तर अरूको अनुपातमा फरक नामअनुसार नै आफ्नो क्षेत्र र पेशाप्रति उनमा रहेको कौशलता ... Read More »
विवाह गर्दिन भन्न रिजन छैन – केकी अधिकारी
फिल्मीबजार ,२७ पौष काठमाण्डौ यतिबेला अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई भ्याइनभ्याइ छ । उनि अभिनित फिल्म लभ साशा यो हप्ता रिलिज हुदैछ । यसैले गर्दा पनि केकीको व्यस्तता यो साता लभ साशाकै लागि हुनेछ । उनले यसै फिल्म मार्फत पहिलो पटक कर्मासंग स्क्रिन शेयर गरेकी छिन । पछिल्लो समय यी दुइको जोडीलाई दर्शकले मन पराएको कमेन्ट सोसल साइट्स प्रसस्तै देख्न पाइन्छ । ... Read More »
निर्देशक हैन निर्माता – कर्मा
फिल्मीबजार , १७ पौष काठमाण्डौ , कर्मा नेपाली फिल्ममा सम्भावना बोकेको कलाकारमा पर्छन । सानो संसार डेब्यु यी अभिनेता तात्कालिन समयमा आफ्नो कपालका कारण चर्चामा थिए । उनको डेडलक कपालको फ्यानको क्रेज फस्ट लभ सम्म देखियो । गुरुकुल थियटरबाट निस्किएता पनि उनको क्रेजले यस्तो उचाई पायो कि उनको सिंगल पोस्टर बनाएर लूट रिलिज गरिएको थियो । तर यतिबेला अवस्था फेरिएको ... Read More »
सौगातप्रति प्रभावित छु : कमली
के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? नेपाल र अष्ट्रेलियामा एकसाथ फिल्म शब्द रिलिज हुँदैछ । यसको लागि तयारी गर्दैछु । यहिँ काममा व्यस्त छु आज भोली । सौगात मल्ल सँग काम गर्दाको अनुभब कस्तो रह्यो ? नजानेको कुरा यसरी गर भनेर सहि मार्ग देखाउने उहाँको सरल व्यवहारबाट म निकै प्रभावित पनि छु । मलाई निकै खुसी लाग्यो उहाँ संग चलचित्र शब्दमा ... Read More »
बुबाको केहि हात छैन : गौरव
फिल्मीबजार,१३ जेठ २०७३,काठमाण्डौ । अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? म अभिनित चलचित्र गाजलु यही जेठ २८ गते देखि सिनेमाघरहरुमा आउँदै छ । यतिवेला यही चलचित्रको प्रमोशनका लागि लागिपरेका छौ म लगायत चलचित्रको टिम नै । नयाँ चलचित्रको कुरा पनि भइरहेको छ । चलचित्र सम्बन्धि कार्यहरुमा नै आफूलाईं संलग्न गराउँदै आएको छु । गाजलुमा तपाईं कस्तो भुमिकामा देखिनु भएको छ ? ... Read More »
निर्देशनमा महिला पुरुषको कुरा आउँदैन
फिल्मीबजार,७ माघ २०७२,काठमाण्डौ । साबित्री खत्री चलचित्र निर्देशक पछिल्लो समय के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? माघ १ गतेदेखि हलहरुमा चलचित्र काफ्ला पाक्यो आएको छ । त्यही चलचित्रको प्रचार प्रसार अर्थात हाम्रो चलचित्र यस्तो हो है भन्ने जानकारी गराउँने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आएको छु । हामीले विदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा पनि यो चलचित्र देखायौ, जहाँ जहाँ चलचित्र देखाउने काम ... Read More »
एवार्ड गर्नु सामान्य काम होइन
फिल्मीबजार,२९ असार २०७२,काठमाण्डौ । नेपाली चलचित्र पत्रकारितामा डेढ दशक भन्दा लामो अनुभब संगालेका दयाराम पाण्डेय सफल गीतकारका रुपमा समेत चिनिन्छन् ।‘रोहिणी’ नामक पत्रिकाबाट चलचित्र पत्रकारिता प्रारम्भ गरेका पाण्डेयले स्पेसटाईम दैनिक, गोरखापत्र दैनिक, क्लासिक एफ. एम., स्टार एफ.एम. हुँदै हाल गोपीकृष्ण ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.अन्र्तगतका टि.भी.फिल्मी, रेडियो फिल्मीको स्टेशन प्रमूखका रुपमा कार्यरत छन् ।‘मुस्कान’चलचित्रबाट गीत लेखन प्रारम्भ गरेका पाण्डेयले झण्डै तीन सयवटा नेपाली ... Read More »
‘एक्लै खुसी छु’ : मनिषा कोइराला
अभिनेत्री मनीषा कोइराला भूकम्पपछि नेपालमा छिन् । क्यान्सरमुक्त भएपछि उनी अहिले शान्ति र आत्मिक सुखको मार्गमा लागेकी छन्। साथै, केही फिल्मका अफरमा पनि विचार गरिरहेकी छन् । तपाईं भूकम्पपछि ग्रामीण भेगमा पुग्नुभयो । त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? मानिसहरूको गरिबी देख्दा निकै पीडा भयो। गरिबीमाथि भूकम्पले झन् चोट दिएको छ। मलाई के लाग्यो भने, हामी प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर ग्रामीण भेगको ... Read More »
नयाँ प्याकेज लिएर अघि बढ्छु : नव नियुक्त बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राई
श्यामसुन्दर गिरी, २२ जेठ २०७२,काठमाण्डौ । ५ महिना अघि देखि रिक्त रहेको चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्षमा राजकुमार राई नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राईलाई नियुक्त गरेको हो । राई अहिले निर्माता संघका अध्यक्ष समेत हुन् भने यस अघि पनि उनले एक कार्यकाल चलाई सकेका छन् । चलचित्र उद्योगमा लामो समय देखि सकृय रहेका राईको नियुक्तले चलचित्र उद्योग ... Read More »
चल्ला त अनमोलको ‘कृ’
फिल्मको प्रचारका लागि राजधानीमा दिउँसै नंग्याईयो दुई युबती
मेनुका फेरी गौरबको ‘साँईली’बन्ने
बोर्डको अध्यक्ष बन्नको लागि ५० लाख घुस बुझाएको खुलासा